News - Zhanzhi အုပ်စု၏ Dongli Lake တောင်တက်လှုပ်ရှားမှုများ
Aprilပြီလတွင် Tianjin သည်နွေ ဦး၊ အလင်းရောင်တိမ်တိုက်များနှင့်လေပြေလေညင်းတို့နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ယခုနွေ ဦး ရာသီ၌အရာအားလုံးပြန်လည်ထူထောင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Tianjin Zhanzhi ၏ ၂၀၂၁ Dongli ရေကန် ၁၂ ကီလိုမီတာတောင်တက်အဖွဲ့တည်ဆောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ပထမသုံးလပတ်ကိုကြိုဆိုသည်။
စနေနေ့နံနက် ၈:၃၀ တွင်လူတိုင်းသည် Dongli Lake အစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာကိုစောစောစီးစီးရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ လူတိုင်း၏မျက်နှာသည်ချိုသောအပြုံးများဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးလူတိုင်းသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး ၁၂ ကီလိုမီတာကိုဆွဲဆောင်နေသကဲ့သို့ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ငါတို့ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနေပါစေငါတို့ရှိသမျှသည်အဆုံးတိုင်အောင်အတူတကွလက်တွဲသွားကြလိမ့်မည်၊
ကျွန်တော်တို့အုပ်စု၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုချန်ထားပြီးနောက်တရားဝင်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ မိတ်ဖက်များက ၁၂ ကီလိုမီတာကိုစပြီးတိုးတက်လာတယ်။ လူတိုင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ထောက်ခံအားပေးပြီးအတူတကွရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြန်လည်စတင်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်အတွက်စစ်မြေပြင်ကိုအလျင်စလိုအနိုင်ရ! နေဟာတောက်ပတောက်ပနေပြီးလေပြေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်လာတယ်။ ငါတို့ပတ်ပတ်လည်လှပရှုခင်းခံစားစဉ်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုအဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းဖြစ်စဉ်ကိုခံစားခဲ့သည်။ လူတိုင်းကအရမ်းကောင်းတယ်။ မကြာခင်မှာပဲတစ်ယောက်ယောက်က ၁၀ ကီလိုမီတာလမ်းလျှောက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသူတို့ကို check-in point မှာတင်လိုက်တယ်။ ကျန်သူများသည်ပြင်ပသို့မရောက်ရှိရန်နှင့်စစ်တပ်နှင့်အတူတက်ပြီးခရီးတစ်ခုလုံးကိုပြီးဆုံးစေသည်။ စကားပြောနှင့်ရယ်မောခြင်းနှင့်လမ်းလျှောက်,6ကီလိုမီတာ, 8 ကီလိုမီတာ, 10 ကီလိုမီတာ, 12 ကီလိုမီတာ, အဆုံးသို့ရောက်! Zhanzhi ၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးသည် ၁၂ ကီလိုမီတာကိုအနိုင်ယူခဲ့ကြပြီးမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမကျန်ခဲ့ပါ။
ဒီခရီးစဉ်မှာလူတိုင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏စွမ်းအားနှင့်ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးသောပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဘယ်စွမ်းအင်ကိုစဉ်းစားနေသလဲ။ အသင်းရဲ့ယုံကြည်မှု၊ အသင်းအတွက်ယုံကြည်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆု session တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…
ဒီအရာတွေအားလုံးဟာသိပ်အရေးမကြီးပေမယ့်အရေးအပါဆုံးကတော့လူတိုင်းပါ ၀ င်မယ်ဆိုရင်ဆုချခံရမှာပါ။